Blanket - ပတ်ဝန်းကျင်အသံများနှင့်အခြားအရာများကစားရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု Linux မှ
Blanket - ပတ်ဝန်းကျင်အသံများနှင့်အခြားအရာများကစားရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု
ယနေ့လူများစွာသည်အလုပ်များ၊ ပျော်စရာများသို့မဟုတ်အနားယူရန်အတွက်ကွန်ပျူတာများနှင့်အဆက်မပြတ်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နေကြသည်။ ထိုဖြစ်ပျက်နေစဉ်, သူတို့ကများသောအားဖြင့်အတူတူပင်ကိုအသုံးပြုပါ သီချင်းနားထောင် သို့မဟုတ်နားထောင်ရုံသာ ကောင်းသောနောက်ခံအသံ လိုချင်သောလှုပ်ရှားမှုသည်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်အွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အခြားအချိန်များတွင်ရိုးရှင်းသောကစားသမားတစ် ဦး ကိုအသုံးပြုကြသည်။
ဒါကြောင့်မှကြွလာသောအခါသို့သော် ကစားသည် ရိုးရှင်းပြီးသာယာသော နောက်ခံအသံများ သို့မဟုတ်ရိုးရိုးနှင့်ထူးခြားသောတေးသံသို့မဟုတ်သီချင်း၊ လျှောက်လွှာကိုခေါ်သည် စောင် ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အပြည့်အဝရိုက်ထည့်ပါ စောင်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်လျှောက်လွှာကိုသတိပြုသင့်သည် «နားကြပ်»သင်အွန်လိုင်းချိတ်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းသည်ကြော်ငြာပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲပတ် ၀ န်းကျင်အသံများသို့မဟုတ်တေးဂီတဖြင့်အင်တာနက်ဗီဒီယိုများကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုထားသဖြင့်။
"နားကြပ်သည် Mac, Windows နှင့် Linux တို့အတွက်ရိုးရှင်းသောဂီတဖွင့်စက်ဖြစ်ပြီး YouTube တွင်ရှာဖွေမှု၊ အမျိုးအစားများနှင့်ခေတ်များနှင့်ကျော်ကြားသော home screen နှင့် Reddit မှရေဒီယိုတစ်ခုပါရှိသည်။ နားကြပ်သည်ဂီတခွဲခွဲပေါင်း (၈၀) ကျော်မျှဝေထားသောသီချင်းများကိုယူပြီး၎င်းတို့ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးအလိုအလျောက်ဖွင့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်ကဲ့သို့သောအခြားလူသားများရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်းဂီတအသစ်ကိုရှာဖွေရန်အလွန်ထူးခြားသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။" နားကြပ် - YouTube နှင့် Reddit မှဂီတဖွင့်နိုင်သည်
1 Blanket: နောက်ခံအသံများကစားခြင်းအတွက်အပလီကေးရှင်း
သင့်ရဲ့အဆိုအရ GitHub ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်, စောင်ဤသေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းသောလျှောက်လွှာကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည်
"ကွဲပြားခြားနားသောအသံများနားထောင်ရန်အသုံးဝင်သော application တစ်ခု။ အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်နိုင်သည့်အသံ။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကသူတို့ကိုဆူညံတဲ့ဝန်းကျင်မှာအိပ်ပျော်ခွင့်ပြုလိုက်ရုံပဲ။"
လက်ရှိတွင် စောင် ဗားရှင်းအဘို့အသွား « 0.4.0 » နှင့်၎င်း၏အကြားရှိပါတယ် အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များ အောက်ပါ:
ရိုးရှင်း။ တိုက်ရိုက်ဂရပ်ဖစ် interface ကောင်းသည်။ အသုံးပြုသူကိုပတ်ဝန်းကျင်အသံများ (သဘာဝ၊ ခရီးသွားခြင်း၊ အတွင်းပိုင်း၊ ဆူညံသံနှင့်ထုံးစံ) သေးငယ်သည့်စုဆောင်းခြင်းကိုဖော်ပြထားသည့်အခါ၎င်းသည်အသံအတိုးအကျယ် slider bar ကို အသုံးပြု၍ နားထောင်သူများ၏ဆန္ဒနှင့်လိုချင်သောအသံပမာဏကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ အလွန်အသုံးဝင်သောအရာတစ်ခုမှာ၎င်းသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီ၏စိတ်ကြိုက်ရောနှောထားသောရောစပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်ထည့်သွင်းထားသောသို့မဟုတ်ထပ်ပေါင်းထည့်ထားသည့်အသံများစွာကိုဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။
startup မှာနောက်ခံပြန်ဖွင့်: ဂရပ်ဖစ် interface ကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရှောင်ရှားရန်။ နောက်ဆုံးအသုံးပြုသောအသံဖွဲ့စည်းမှုကိုဖွင့်ပါ။ လျှောက်လွှာကိုပိတ်ပြီးနောက်ဤဆက်တင်များကိုဆက်လက်ကစားနိုင်သည်။
အသုံးဝင်သောကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းများ - ကီးဘုတ်မှတစ်ဆင့်လျှောက်လွှာကိုပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာတိုက်ရိုက်အသုံးပြုရန်။
နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Distro Arch နှင့် OpenSuseကနေတဆင့် PPA repositories ကို ငါတို့တ ဦး တည်းရှိလျှင် Ubuntu Distro သို့မဟုတ်အချို့သောအနကျအဓိပ်ပါယျသို့မဟုတ်သဟဇာတ, Flatpak မှတဆင့်နောက်ဆုံးတော့က download လုပ်ပါနှင့်ခြစ်ရာကနေ compile လုပ်ပါ။
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်အတိုင်းနောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်လိမ့်မည် MX Linux respin ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများသူလက်ခံပေမယ့် PPA repositories ကို, ငါတို့ကအမြဲတမ်း repository ကိုသော့ထည့်သွင်းရမယ်, သူကလက်ခံပေမယ့် Flatpak, ဒီအမြဲအထုပ်၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လေးလံသောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို install လုပ်။
ထို့ကြောင့်၊ ပထမတစ်ခုမှာ download ကို unzip လုပ်ရန်ဖြစ်သည် ဖိုင် "tar.gz" de la ဗားရှင်း "0.4.0"။ ထိုအခါ folder ကိုအတွင်း၌ကိုယျ့ကိုယျကိုနေရာချ «~/Descargas/blanket-0.4.0» နှင့် root terminal။ အောက်ပါ command command များကို execute:
ပထမလိုင်းရှိ package အားလုံးရရှိပြီးအောင်မြင်စွာ install လုပ်လျှင် application ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ စောင် မင်းရဲ့ပြproblemနာမရှိဘူး GNU / Linux Distro။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်လေ့လာမှုမှာစာကြည့်တိုက် «libhandy-1-dev» ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ repository တွင်မရှိသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ download ပြုလုပ်ပြီး၎င်းအားမှီခိုသောဖိုင်များဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့သည် («gir1.2-handy-1_1.0.0-2_amd64.deb, libhandy-1-0_1.0.0-2_amd64.deb y libhandy-1-dev_1.0.0-2_amd64.deb») အောက်ပါကနေ link ကို အောက်ပါ Command ဖြင့် သုံး၍ install လုပ်သည်။
ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ စောင် မှ Applications မီနူးစူးစမ်းလေ့လာပါ။ အောက်ပါပုံများတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း:
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အခမဲ့နှင့်မူပိုင်ခွင့်ကင်းလွတ်သောအသံအချို့ကိုဒေါင်းလုပ်ရယူလိုသူများအနေဖြင့်အသံသက်ရောက်မှုများတိုးပွားစေရန် စောင်အောက်ပါတို့မှအချို့ကိုသင် download လုပ်နိုင်သည် link ကို.
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Blanket», သေးငယ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အသံများပြန်ဖွင့် app ကိုနှင့်အခြားသူများ မာလ်တီမီဒီယာအသံဖိုင်များနှင့်ဂီတ ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော Operating Systems တွင်နောက်ခံမျိုးပွားခြင်းအတွက်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်၊ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Blanket - ပတ်ဝန်းကျင်အသံများနှင့်အခြားအရာများကစားရန်အတွက်အသုံးဝင်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခု
BTColor - GNU / Linux Terminal ကိုအလှဆင်ရန်အတွက်အသေးစား script တစ်ခု
ရဲရင့်သောဆုလာဘ်များ သို့မဟုတ် သင့်ငွေကိုစွန့်စားခြင်းမရှိဘဲ cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာသို့ဝင်ရောက်နည်း